Home STARS EUROPEAN Thiago Alcantara tantara momba ny tantaram-pianakaviana malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Tago". Ny tantaram-pianakavian'i Thiago Alcantara tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao ary ny fahaiza-milalao azy, saingy vitsy no mihevitra ny Biografia Thiago Alcantara tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Thiago Alcantara tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Voalohandohan'ny fiainana
Thiago Alcántara do Nascimento dia teraka tamin'ny andro 11 tamin'ny volana 1991 tany San Pietro Vernotico, atsimon'i Italia. Tsy tahaka ireo mpilalao baolina maro nosoratanay, i Thiago dia teraka ho an'ireo ray aman-dreny breziliana be mpanankarena; reny, Valéria Alcântara ary rain'i Mazinho.
Ho an'i Alcantara, dia toa tsy dia niahiahy loatra akory ny fisainany fa hanohy ny asany amin'ny baolina kitra izy, ary manana ray izay nahazo ny loka FIFA World Cup ihany koa dia nanampy azy. I Thiago dia niaina fiainam-pahamarinana malaza toy ny rainy nipoitra tany ambony tao amin'ny Stadium Stadium A Spot ary ny fianakaviany dia anisan'ireo nitazona baolina Breziliana tamin'io fotoana io. Mazinho nohazavaina tetsy ambany dia nanalefaka taorian'ny fampiatoana ny zanany lahy sy ny vady tsara tarehy raha mbola mitohy ny lalao mondialy 1994.
Noho izany, mahaliana ny tantaran'i Thiago, raha tsy hafahafa - ny an'ny zazalahy iray izay nahita ny rainy nandrombaka ny baolina manerantany ho an'i Brezila amin'ny 1994 ary nanapa-kevitra ny ho tonga mpilalao baolina matihanina. Noho ny firaiketan'ny rainy sy ny atletisma renin-dreniny (hilaza amintsika bebe kokoa ny zavatra niainan'ny fiainam-pianakaviantsika), dia nanjary nahazo talenta mahatalanjona ny fiainan'i Thiago tamin'ny fahazazany. Ankoatr'izay, hitany fa manana fanapahan-kevitra hentitra izy mba hanatanterahana ny nofinofiny ary ny fanirian-dohany dia tsy hoe faniratsirana fotsiny.
"Te-ho mpilalao baolina aho", hoy izy rehefa nanadinadina ny Portalbarra.com.br tamin'ny faha-iraika ambin'ny folo. Ny mompera Mazinho (l.), Izay nandresy tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany niaraka tamin'i Brezila tamin'ny 1994, dia nanamarika tsy an-kijanona azy tamin'ny làlan-kizorana marina hatramin'ny taona tena izy. Tahaka izany ihany koa, "Ny fanomezana voalohany azoko dia ny baolina kitra. Nandany ny fotoanako rehetra aho. "
Ankoatra ny fanomezana ny fanomezam-pahasoavana voalohany, ny rainy dia handamina tsy tapaka azy amin'ny fotoam-pampianarany manokana. Rehefa avy nianatra izy, dia nandany fotoana nampianarana ny zanany ny antikristy ilaina ao anatin'ilay lalao. Amin'ny maha-zanaky ny World Cup 1994 FIFA nahazo an'i Mazinho, dia angamba tsy dia mahagaga loatra izany raha mbola teo am-pandehanana tany superstardom hatramin'ny fahazazany.
Ity ambany ity ny sarin'i Tiago sy ny rainy tamin'ny fahazazany nandritra ny fotoana iray izay hanombohany hanombohana ny asany.
Thiago Alcantara tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Karohy amin'ny famintinana
Na eo aza ny fahatanorany, efa manana andiam-piainana maro sy ny traikefa baolina kitra i Alcantara teraka Italianina. Zanaka manan-karena sy sambatra izy ary afaka mifandray tsara amin'ny namany mpilalao baolina kitra.
Ny lalaon'ny baolina kitra nataon'i Thiago dia tena làlana marina tokoa. Nifindra teo anelanelan'i Brezila sy Espaina noho ny fifanintsanana baolina kitra nataon'ny rainy ny Alcantara nanomboka baolina tamin'ny taona 5 (herintaona aorian'ny fandresen'ny vatan'izao tontolo izao ny dadany). Izy dia nilalao ho an'ny vondrona Espaniola Ureca de Vigo sy Kelme CF, ary manana tsipika anankiroa ao amin'ny CR Flamengo any Brezila, alohan'ny hidirana ao amin'ny academy youth of La Masia ao Barcelona tamin'ny taona 14 tao 2005.
Nanomboka teo amin'ny haavon'ny Flamengo any Brezila izy ary tamin'ny dimy taona dia nifindra tany Espaina niaraka tamin'ny rainy izy ary nanomboka nilalao tamin'ny ekipa Galician Ureca tao Nigrán. Tao amin'ny 2001 dia nilalao niaraka tamin'i Kelme CF izy raha nilalao ho an'i Elche CF ny rainy. Niverina tany Flamengo taona 10 izy ary niverina tany Espaina indray tao 2005, ary nanao sonia an'i FC Barcelone, izay nilalao ny filohan'i Patrick. Niakatra ambony noho ny lalao baolina fandaka La Masia i Thiago ary nanao ny laharana voalohany tamin'ny ekipany tao 2009.
Ny fahaiza-milalao milamina sy ara-teknolojika izay nanomezany azy, ny fahaiza-manaony ary ny baolina baolina dia nitarika azy hanolo ny lehibe taloha toy ny Eiður Guðjohnsen ary Yaya Toure. Taorian'ny nahazoany mari-boninahitra, anisan'izany ny lohatenin'ny La Liga, ny Ligin'ny UEFA Champions League sy ny Fiadiana ny Tompondaka Erantany FIFA ao Barcelone, Thiago dia nahatsapa fa fotoana tokony handao an'i Barcelona indrindra indrindra fa ny mpanolo-Pep'dia namela ny zanak'ondry. Nanangana nofinofy hafa ho an'i Bayern Munich izy Pep izay mpanazatra ny alemana alemà dia tsy maintsy niady ho an'ny zanany lahy. Amin'ny teniny ...
"Niresaka tamiko aho ny klioba momba ny foto-kevitrao ary nilaza tamin'izy ireo ny antony tiako hatao Thiago. Izy no hany mpilalao tiako. Ho azy na tsia. " - Pep Guardiola ho an'ny gazety talohan'ny nanaovana sonia an'i Thiago ho an'i Bayern Munich.
Thiago Alcantara tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Relationship Life
Tsy isalasalana, ny tsanganana rehetra tsara tarehy Thiago maneho eny an-kianja dia mila ny olona marina hanamafy ny fanapahan-keviny. Azo antoka fa ny nofin'i Thiago amin'ny baolina kitra dia nofenoin'ny vehivavy tsara tarehy sy mahafinaritra. Ankoatra ny modely Holandey, Julia, ny fitiavany ny ainy. Thiago dia nihaona tamin'ny fitiavany ny fiainany Julia, tsy ela taorian'ny nahatongavany Bayern München.
Tamin'ny 27 June 2015, dia nanambady ny sipany Júlia Vigas izy, nandritra ny lanonana tao Sant Climent de Peralta, Catalonia, Espaina.
Samy tia ny misotro amin'ny fetibe Oktoberfest, ny 16- hatramin'ny 18 andro fety (lehibe indrindra eran-tany) izay natao isan-taona any Munich, Bavaria, Alemana.
Samy nanan-janaka lahy antsoina hoe Gabriel, miaraka amin'ny rainy beau, izy ireo.
Thiago Alcantara tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Araka ny voalaza tetsy aloha, avy amin'ny fianakaviana matanjaka ara-panatanjahatena i Thiago. Tsara tarehy i Thiago manana ny endriky ny dadany ary ny tonon-kiran'ny reny izay maneho ny hatsarany. Ankehitriny dia manome anao fohifohy momba ny ray aman-dreniny izahay.
ny Ray: Iomar do Nascimento (teraka 8 April 1966), fantatra amin'ny anarana hoe Mazinho, dia mpilalao baolina kitra Breziliana sy mpilalao taloha, ary koa ny lehiben'ny mpanazatra ny klioba Grika Aris.
Ny zava-bitany lehibe indrindra teo amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 1994 dia izy no mpikambana fahatelo tamin'ny fankalazana ny "lehilahy telo sy zazakely" niaraka tamin'i Bebeto sy Romário nandritra ny fandresena farany teo amin'i Holandy, nandresy ny fifaninanana iray tao Brezila.
Mother: Ny maman'i Thiago, Valéria Alcântara Valéria, dia mpilalao volley ball teo aloha. Niaina fiainam-pifaliana izy noho ny vady aman-janany mahagaga. Nahatsiaro i Valeria indray mandeha; "Tamin'izany fotoana izany, raha nody avy any an-tsaha izy ireo, dia navoakan'i Thiago ny kiraro nanerana ny gorodona ary nirohotra nanodidina azy ireo tamin'ny baoritra anaty tany toy ny hoe kesika. Ny zavatra tiany hatao dia ny mandefa ny dadany izay 'hero'. izy nilaza tamin'ny ESPN Brezil.
rahalahy: Thiago dia manana rahalahy antsoina hoe Rafael. Rehefa nanatevin-daharana ny akademia La Masia i Thiago, dia nanao izany koa i Rafael zandriny lahy. Ny tapakilan'ny fidirana dia tao anatin'ny fototarazony. Thiago sy Rafael (fantatra ankehitriny amin'ny lisitry ny ekipa tahaka ny Rafinha) dia, toa ny Neville, roa taona isaky ny vanim-potoana. Ireto ambany ireto ireo rahalahy roa nandritra ny fotoany tao FC Barcelone.
Thiago Alcantara tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Fiainana manokana
Thiago dia manana ny toetra maha-izy azy.
hery: Mahery fo izy (misaotra ny rainy), tapa-kevitra, matoky, entanim-panahy, manantena, ary marina
fahalemena: Tsy manam-pahataperana, malemy fanahy, tsy mora tezitra, mandefitra, mahery setra
Inona no tian'i Thiago: Ny akanjo am-panahy, ny fanamby ara-batana, ny fanatanjahan-tena sy ny tatoazy izay mampahatsiahy azy ny tantaran'ny fahazazany.
Inona no tsy tian'i Thiago? Ny tsy fahafahana miasa, ny faharetana sy ny asa izay tsy mampiasa ny talentany
Raha fintinina, ny fijery voalohany an'i Thiago dia manambara zavatra iray izay manamarika ny fiandohan'ny zavatra mahery sy mampihetsi-po.
Thiago Alcantara tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Ny nofiny
Angamba io ny rà Breziliana tao aminy, na ny nandaniany ny taonany tao Barcelone, fa ny fanirian'i Thiago kosa dia tsy ny hivelona amin'ny baolina matihanina. Te hamela lova hafa koa izy, raha nilaza tamin'ny masoivohom-baovao izy Reuters ao amin'ny 2011: "Ny nofiko dia ny hanamafy ny tenako eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra [fa] te-ho mpilalao iray aho no hitadidy foana. Mpilalao iray izay eken'ny olona ho toy ny olona manaiky azy ireo. "
Thiago Alcantara tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Izay hitany ao amin'ny Football
Ny fiainana dia saiky momba ny lalao mahafinaritra ho an'i Thiago. "Ny football no mampifaly ahy" hoy izy Reuters. Manohy izy ... "Isaky ny milalao aho dia hadinoko ny zava-drehetra manodidina ahy ary na ny tenako aza. Mila baolina kitra manodidina ahy aho, izany no mahatonga ny zavatra ho vita. " Ary tamin'ny resadresaka ara-pihetseham-po, rehefa avy nanao ny ekipany voalohany tamin'ny ekipa Borussia Dortmund izy tamin'ny Aprily 2015, dia hoy izy: "Ny lalao baolina kitra dia mihoatra ny lalao iray - ny fiainako", alohan'ny hizarana ny fanampiana azy amin'ny fitantanana indray amin'ny Twitter.
Thiago Alcantara tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Ny traikefa
Ny lalao Alcantara dia tena vokatry ny fiantraikany maro nandritra ny taona maro. "Manam-bintana aho handray soa avy amin'ny fitotoana goavana," hoy izy Reuters. "Manana ny fakan'ny Breziliana raiko aho, ary tany Espana dia nampidirina tao amin'ny fikambanana tsara kokoa aho teo amin'ny sehatra ary nahazo fahatakaran-kevitra ara-tsaina." Ny hery mitarika lehibe indrindra anefa dia mitoetra Pep Guardiola: "Hanova ny fomba fisainanao momba ny baolina kitra," Niteny i Thiago bundesliga.com. "Izany no nahatonga ahy hiaraka tamiko."
FACT CHECK: Misaotra noho ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Thiago Alcantara misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Martin Braithwaite Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Aogositra 3, 2019
Ny tantaram-piainan'i Pep Guardiola momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa
Febroary 12, 2017
Ny tantaram-piainan'i Manuel Neuer ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ernesto Valverde tantara an-tsary momba ny tantaram-pahaterahana malaza tsy fantatra